Nezvedu | Hangzhou Xipingzhe Zvishandiso Technology Co., Ltd.
XPZ inotungamira kugadzirwa kwerabhoritari giraziware washer, iri muguta reHangzhou, Zhejiang Province, China. XPZ inonyanya kutsvagisa, kugadzira uye kutengesa iyo otomatiki giraziware washer inoiswa kuBio-pharma, Hutano hwekurapa, Hutano hwekuongorora nharaunda, Kudya kuongorora, uye Petrochemical munda.
Kambani yedu yakatanga kubva munyaya yakaitika yakatenderedza muvambi. Mukuru wemuvambi ari kushanda murabhoritari semuchenesi. Iye ari pamusoro pekuchenesa kwemanyore pane ese marudzi egirazi zvigadzirwa. Akaona kuti kusadzikama kwekuchenesa kwemawoko kazhinji kwaikanganisa mhedzisiro yekuyedza, uye kuchenesa kwenguva refu uye nzira yekuchenesa zvinounzawo kukuvara kwemuviri kuhutano. Muvambi anotenda kuti kuchenesa kwakadai kunenjodzi kunofanirwa kuitwa mukati memakomba akavharika kuti ave nechokwadi chekuchengetedzwa kwemuchenesi. Ipapo Simple mudziyo wakabuda. Mu2012, ruzivo uye kutsvagisa pamunda wekuchenesa zvikave zvakadzika uye zvakadzama, zvido zvehunyanzvi zvakawanda zvinopihwa kune vakatanga uye vanobatirana navo. Muna 2014, XPZ ine yekutanga chizvarwa giraziware washer.
Nebudiriro, takava timu yehunyanzvi ine inovandudza kugona kugona murabhoritari, kurapwa, zvemagetsi, eminda yekuchenesa maindasitiri, uye kugara uchiteerera kune zvitsva zviyero uye zviridzwa pane chikafu, nharaunda, chemishonga, kuona kwemagetsi, XPZ yakazvipira kubatsira kugadzirisa ese marudzi ekuchenesa matambudziko. Isu tiri vatengesi vakuru kune veChinese vanoongorora zviremera nemakemikari emakambani, zvakadaro, XPZ brand yakapararira kune dzimwe nyika zhinji, seIndia, UK, Russia, South Korea, Uganda, Philippines nezvimwewo, XPZ inopa mhinduro dzakabatanidzwa zvichienderana nezvinodiwa zvakagadziriswa , kusanganisira kusarudzwa kwechigadzirwa, kuisirwa uye kushandisa kudzidziswa nezvimwe.
Tichaunganidza mamwe emabhizimusi mukana wekupa zvigadzirwa zvitsva nemhando yepamusoro uye nebasa rakanakisa, kuchengetedza hushamwari hwedu hwakareba.